Shiinaha UM-1010 / C / T _ 10.1 inch USB Monitor Soo-saare iyo Badeecad | Lilliput
12G-SDI kormeeraha kormeeraha
4K kormeere agaasime
Kormeeraha wax soo saarka
Qalabka Rack Mount
On Monitor Monitor
Kormeeraha SDI 5-12 ″
Kormeerka Amniga 7-16 ″
Kormeeraha Taabashada Capacitive 7-13.3 ″
Kormeerka guryaha birta 7-15 ″
Kormeeraha taabashada taabashada 7-15 ″
Kormeeraha USB 7-14 ″
Adeegyada OEM & ODM
Habka Imtixaanka Tayada
Teknolojiyadaha Muhiimka ah
UM-1010 / C / T _ 10.1 inch USB Monitor
Naqshadeynta abaalmarinta ku guuleysatay ee isku darsamaysa adeegsiga jilicsanaanta, ujeeddooyinka badan oo leh adkeysi soo hagaagtay, iyo muuqaal aad u wanaagsan… kani waa kan ugu qaalisan ee la taabto USB-ga oo ah kan ugu hooseeya ee adduunka lagu qiimeeyo shaashadda. Kudar goob miisaska waxtar leh qalabkan wax ku ool ah, dhaqaale, iyo la qaadan karo.
Lilliput waa soosaarayaasha Muuqaalka LCD-ga ah si ay u soo bandhigaan 10.1 ″ Touchscreen LCD Shaashadda taabashada heerka fasalka leh shaashadda muuqaalka USB-ga (waxay la shaqaysaa Windows iyo Mac OS) iyo qalabka wax lagu kiciyo. Kaliya hal xariir USB ah ayaa loo baahan yahay si loo siiyo awood shaashadda 7 'iyo in la soo bandhigo iyo isdhexgalka taabashada kombiyuutarka. Qaybta bandhigga 10.1 ″ qaybta soosaarka warshadaha waxay ku darsantahay tiknoolajiyadeena dambe ee LED-ka ee iftiinka kororka waxayna leedahay shidma shidan iftiinka iftiinka oo si toos ah u yareynaya iftiinka dambe ee loo baahan yahay. Intaa waxaa dheer, Chip Monolithic Ceramic Capacitors ayaa loo adeegsadaa in kasta oo ay ka baxsan tahay unugga xasilloonida iyo adkeysiga sii fiicnaanaya gaar ahaan xaaladaha heerkulka ba'an.
Wax soo saarkan hal-abuurka ah wuxuu ka kooban yahay 4-silig diidmo ah taabashada shaashadda. U isticmaal shaashadda ku habboon taabashada sida qalabka soo gelintaada, xakamee dulqabkaaga jiirka ama kumbuyuutarka shaashadda ee la socda nidaamkaaga qalliinka. Shaashadda taabashada waxay u adeegsaneysaa dekedda USB-ga sida is-dhexgalka. Waxaad ku xidhi kartaa dhowr 708TSU kormeerayaasha kombuyutarkaaga iyo muraayadaha shaashadda ayaa isku mar ka wada shaqeyn doona iyada oo loo marayo taageerada kormeerayaasha badan.
Tusaale: UM-1010 / C / T
Guddi taabasho: 4-silig resistive (5-silig ikhtiyaar ahaan)
Muuqaal: 10.1 inji, 1024 × 600, 250nit
Noo soo dir email U soo dejiso sida PDF Tilmaamaha isticmaalaha
Fiiro gaar ah: UM-1010 / C oo aan lahayn taabasho taabasho,
UM-1010 / C / T oo leh taabasho taabasho.
Hal xarig ayaa wada sameeya!
Cusbooneysiinta USB-kaliya xiriirinta-ku dar kormeerayaasha iyadoon lagu darin wax qas ah!
Sidee loo adeegsadaa?
Ku rakibidda Darawalka Kormeeraha (AutoRun);
Dhagsii muujinta dejinta muuqaalka ee saxaarada nidaamka oo arag liiska;
Setup menu ee Xalinta Shaashadda, Midabada, Wareega iyo Kordhinta, iwm.
Kormeerka Darawalka wuxuu taageeraa OS: Windows 2000 / Windows XP (32bit 銆 64bit) / Windows Vista (32bit 64bit) / Windows7 (32bit 銆 64bit) / Mac OS X
Maxaad ku qaban kartaa?
UM-1010 / C / T wuxuu hayaa kumanaan codsiyo waxtar leh oo xiiso leh: ka dhig bandhiggaaga guud inuu yahay mid bilaash ah, dhig daaqadahaaga Fariimaha degdegga ah, ku sii daa waraaqahaaga arjiga, u isticmaal sida qaab sawir dijitaal ah, sida muujiye sax ah saar khariidadahaaga ciyaaraha.
UM-1010 / C / T wuxuu ku fiican yahay isticmaalka laptop-ka yar ama netbook sababo la xiriira culeyskiisa fudud iyo isku xirnaanta USB-ga ah, wuxuu kula safri karaa laptop-kaaga, looma baahna leben awood!
Waxqabadka Nidaamka Raadraaca, Kormeerka Shabakada Nidaamka, Wareegyada CPU;
Hayso ciyaaryahankaaga warbaahinta si uu u xakameeyo madadaalada Helitaanka degdega ah ee sanduuqyada qalabka ee muhiimka ah ee loogu talagalay ciyaaraha internetka U adeegso sidii muuqaalka labaad ee kombiyuutarada ku xidhan TV-yada Samee bandhig 2aad ama 3aad iyada oo aan loo baahnayn kaar garaaf ah oo cusub;
SKYPE / Google / MSN Chat intaad isticmaaleysid codsiyada kale ee shaashadda buuxa Ka Daawo Saaxiibbada Facebook iyo MySpace Ka dhig Macaamiilkaaga Twitter markasta ha ahaado mid ka baxsan shaashaddaada shaqada;
Halbeegga loo yaqaan 'Creative
Park' oo ah qalabka wax lagu duubo ee loo yaqaan 'Adobe Creative Suite' ama qalabka lagu xakameeyo Powerpoint: ku xafid waraaqahaaga midabaynta, midabada, iwm shaashad gaar ah;
Ganacsi (Tafaariiq, Daryeel Caafimaad, Maaliyad) oo lagu
milmaan habka iibsiga ama barta diiwaangelinta. Qaab kharash-ku-ool ah oo macaamiil / macaamiil badani ku diiwaangeliyaan, ku galaan macluumaadka, kuna xaqiijiyaan. U isticmaal hal kombiyuutar isticmaaleyaal fara badan (oo wata softiweerka wax-u-qabashada - kuma jiraan);
Previous: UM-900 / C / T _ 9.7 inch USB Monitor
Xiga: UM-1012 / C / T _ 10.1 inch USB Monitor oo leh afhayeenka
Guddi taabasho 4-silig diidan (5-silig ikhtiyaari ahaan)
Cabir 10.1 ”
Qaraarka 1024 x 600
Iftiin 250cd / m²
Isbarbar dhig 500: 1
Daawashada Xagasha 140 ° / 110 ° (H / V)
USB 1 × Nooca-A
Awooda hawlgalka W6W
DC Gudaha DC 5V
Heerkulka Hawlgalka -20 ℃ ~ 60 ℃
Heerkulka Kaydinta -30 ℃ ~ 70 ℃
Aragti (LWD) 253.5 × 162.5 × 34/61 mm (oo leh qaws)
Kormeeraha dugsiga sare
kormeerka USB taabashada
UM-1012 / C / T _ 10.1 inch USB Monitor oo leh afhayeenka
UM-900 / C / T _ 9.7 inch USB Monitor
UMTC-1400 _ 14 inji USB nooca-c kormeeraha ah
Kormeeraha Amniga 7-16
USB Monitor 7-14 ”
No.26 Fu Qi North Wadada, Lan Tian Development Development Zone, Zhang Zhou, Fu Jian, 363005, Shiinaha
Alaabada Hot - Sitemap - AMP Mobile
kormeeraha baahinta , Sdi Cctv Monitor, Usb Powered Monitor , Lilliput Monitor , Lilliput , 5 Inch 4k Camera Monitor,